Beeraleyda Hiiraan oo Dagaal Culus la galay Ayaxa ka yimid Galmudug - Awdinle Online
Beeraleyda Hiiraan oo Dagaal Culus la galay Ayaxa ka yimid Galmudug
December 23, 2019 (AO) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in ayax guuraya oo raxan raxan u socda, uu ku dagey deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan.
Ayaxa ayaa shalay ku soo dagey agagaarka iyo duleedka magaaladda beledweyne gaar ahaan deegaanka Ceel-jaalle ee gobolka Hiiraan, iyadoo marki dambe ay dadku iska kiciyeen ka dib markii ay la galeen dagaal ayna ku rideen rasaas iyo bambooyin.
Dadka beeralayda ah ee ku nool koofurta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in uu beerahooda xalay ku dagey Ayaxaas, iyagoo sheegay in ay cabsi xooggan ka qabaan in uu dalagyadooda ka baabi’iyo.
Ayaxa ayaa Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa ka cabanayay dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan gobolka Galgaduud, waxaana hadda ay u muuqataa in uu ku dageyo kuna fidayo qaybo kale oo ka mid ah gobolada dalka.
Previous articleChinese & Korean investors visit Mogadishu
Next articleSomaliland oo diiday in ay Wadahadalo la furto Soomaaliya.